Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - EducationBro Study Magazine Abroad
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Tani ayaa lagu soo ururiyey si wanaagsan ugu adeegaan kuwa ka walaacsan sida ay 'Information Shaqsi Garan’ (PII) loo isticmaalay online. PII, sida ku qeexan sharciga gaarka ah US iyo ammaanka macluumaadka, waa warbixin la isticmaali karo on gaar ah ama macluumaad kale si loo aqoonsado, xiriirka, ama ay helaan qofka kaliya, ama in la aqoonsado shaqsiga ah ee macnaha. Fadlan si taxadar leh u akhri siyaasadda asturnaanta si ay u helaan faham cad oo sida aan u ururiyaan, isticmaalka, ilaaliyo ama haddii kale xamili aad Information Shaqsi Garan waafaqsan our website.
Waa maxay macluumaadka shakhsiyeed aynaan u ururiyaan dadka in booqo blog, website ama app?
Annagu ma ururiyaan macluumaad ka visitors of our site ama faahfaahin kale si uu kaaga caawiyo in aad waayo-aragnimo.
Goorma waxaan ururinaa macluumaad?
Waxaan soo ururin macluumaad aad ka marka aad ama geli macluumaad ku saabsan goobta.
waxay na siiyaan natiijocelin on alaabta ama adeegyada
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka aan kaa uruurinno ka marka aad iska diiwaan, wax ku iibsatid, saxiixdo for our warside, jawaabaan xidhiidhka baadhitaan ama suuq ah, isticmaalaysa internetka ee, ama isticmaal qaababka kale qaar site siyaabaha soo socda:
Our website waa iskaan si joogto ah daloolada ammaanka iyo dayacanka yaqaan si uu ugu caddeeyo booqashadaada our site sida ammaan ah sida ugu macquulsan.
Waxaan u isticmaali Scanning Agab-joogta ah.
Waxaan ha isticmaalin Shahaadada SSL
• Waxaan keliya oo ay bixiyaan articles iyo macluumaadka. Waxaan marnaba weydiiso macluumaadkaaga shakhsiyeed ama gaarka loo leeyahay sida magacyada, cinwaanada email, ama tirada credit card.
Ma waxaan u isticmaali 'cookies'?
Haa. Kukiyada waa files yar in goobta ama adeeg bixiyaha wareejinta ay si drive adag your computer ayaa iyada oo loo marayo browser Web aad (haddii aad u oggolaatid) oo awood goobta ama nidaamyada bixiyaha adeegga ee ah in la aqoonsado aad browser oo ay qabsadaan iyo xusuusan macluumaadka qaarkood. tusaale ahaan, waxaan isticmaali cookies si ay nooga caawiyaan soo xusuuso, oo loo farsameeyo waxyaabaha aad gaadhigii shopping. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu caawiyo in uu fahmo aad door bidayso ku salaysan waxqabad hore ama hadda goobta, kaas oo awood inoo siineysaa in ay kuu siiyaan adeegyo soo hagaagay. Waxaan sidoo kale u isticmaali cookies ah inay naga caawiyaan isku ururiso macluumaadka wadar ahaan labada lug ku saabsan gaadiidka goobta iyo is dhexgalka site si aan ku siin karaan waayo-aragnimada goobta wanaagsan iyo qalab mustaqbalka.
Waxaan isticmaalnaa cookies si:
• Fahmaan oo badbaadin la door user ee booqashooyin mustaqbalka.
• La soco xayeysiis.
• Soo ururinta xogta wadar ahaan labada lug ku saabsan gaadiidka iyo goobta isdhexgalka goobta si ay u bixiyaan waayo-aragnimada goobta wanaagsan iyo qalab mustaqbalka. Waxa kale oo laga yaabaa inaan isticmaalno adeegyada dhinac saddexaad aaminsantahay in ay ula socdaan macluumaadka this naga wakiil ah.
Waxaad dooran kartaa in aad computer iddin Digo, mar kasta oo cookie ah loo soo diray, ama waxaad dooran kartaa in demi dhammaan cookies. Waxaad taas samayn iyada oo goobaha browser aad. Tan iyo markii browser waa wax yar oo kala duwan, eegto Menu Help biraawsarkaaga si ay u bartaan sida saxda ah inuu wax ka beddelo cookies aad.
Haddii aad soo jeedin cookies off, Tilmaamo qaar ka mid ah la naafo doonaa. Ma ay saameyn doonto waayo-aragnimo user ee in aad waayo-aragnimo goobta ku ool ah oo laga yaabaa in aan sii fiican u shaqeyo.
Si kastaba ha ahaatee, weli waxay noqon doontaa in aad awoodid in ay dalabaadkooda .
Annagu ma iibiso, ganacsiga, ama haddii kale lagu wareejiyo si ay dhinacyada ka baxsan Information Shaqsi Garan haddii aan bixino users ogeysiis hormaris. Tani ma waxaa ka mid ah website marti-hawlgalayaasha iyo xisbiyada kale oo naga gacan ka hawlgala our website, qabashada ganacsigayaga, ama u adeegaya dadka isticmaala noo, inta dhinacyada kuwa ku heshiiyaan in ay macluumaadkan si qarsoon. Waxa kale oo laga yaabaa in aan sii daayo macluumaadka marka saamaxaaddiisii ​​haboon tahay in ay u hoggaansamaan sharciga, dhaqan siyaasado boggayaga, ama loo ilaaliyo annagaa leh ama kuwa kale’ xuquuqda, hanti ama ammaanka.
Si kastaba ha ahaatee, macluumaadka booqdaha aan qofka lagu garan karo waxaa laga yaabaa in ay xisbiyada kale ee marketing bixiyo, advertising, ama isticmaalka kale.
Mararka qaarkood, at our digtoonaan, laga yaabaa in aan ka mid ah ama u bixiyaan waxyaabaha ama adeegyada dhinac saddexaad on our website. Goobahan dhinac saddexaad waxay leeyihiin siyaasado gaar ah kana madaxbannaan gaarka ah. Sidaas awgeed waxa aannu lahayn mas'uuliyadda ama deyn ah ee content iyo hawlaha oo ka mid ah goobaha lala. Si kastaba ha ahaatee, Rabno si ay u ilaaliyaan daacadnimada our site iyo soo dhaweyn wax jawaab-celin ku saabsan goobahan.
shuruudaha advertising Google ayaa loo soo koobay kartaa by Principles Advertising Google. Waxay kale oo ay isla meel dhigay in ay bixiyaan khibrad fiican u isticmaala. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?HL = en
Waxaan u isticmaali Advertising AdSense Google website-kayaga.
Google, sida a iibiya xisbiga saddexaad-, isticmaalaa cookies si ay ugu adeegaan xayeysiis on our site. Google ee isticmaalka buskudka iyo hoto awood u in ay u adeegaan xayeysiis in dadka isticmaala our ku salaysan booqashooyin hore in our site iyo goobaha kale ee internetka. Users dooran-baxay karaa isticmaalka buskudka iyo hoto adigoo booqanaya Ad Google iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah Network Content.
Waxaan ku dhaqan soo socda:
• Tirakoobka Dadweynaha iyo Danta Warbixinta
Waxaan, oo ay weheliyaan ganacsato dhinac saddexaad sida Google isticmaali cookies xisbiga ugu horeysay- (sida cookies Google Analytics) iyo cookies xisbiga saddexaad- (sida cookie DoubleClick ah) ama aqoonsiyada kale ee cid saddexaad soo wada ururiya xogta ku saabsan isdhexgalka user la dareenkaa ad iyo hawlaha kale ee adeega ad sida ay ula xidhiidhaan si our website.
Users dhigay karaa rabitaanadayda sida Google xayaysiin aad u isticmaalaya bogga Google Ad Settings ah. Haddii kale, waxaad dooran kartaa adigoo booqanaya bogga Network Advertising Initiative Opt Out ama adigoo isticmaalaya ee Browser Google Analytics Opt Out dar on.
Sharciga Ilaalinta Privacy Online California
CalOPPA waa sharciga gobolka ugu horreeyey ee dalka si ay u baahan yihiin websites ganacsiga iyo adeegyada online to post a Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. jiida gaari Sharciga ayaa sidoo kale ka baxsan California ay u baahan yihiin qof kasta ama shirkad dalka Mareykanka (badana way dunida) ka shaqeeya websites ka macaamiisha California ururinta Information Shaqsi Garan in boostada siyaasad gaarka tageen ay website sheegaya dhab ahaan macluumaadka la ururiyey iyo shakhsiyaad ama shirkado kuwaad kula waxaa la wadaago. – Eeg dheeraad ah: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Sida laga soo xigtay CalOPPA, aan ku heshiiyaan in ay soo socda:
Users booqan kartaa goobta si qarsoodi ah.
Marka Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this loo abuuray, waxaan ku dari doonaa link a waxa ay si on page guriga ama ugu yaraan, bogga koowaad la taaban karo ka dib markii galaan our website.
Our link Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxaa ka mid ah ereyga "Privacy’ oo si fudud waxaa laga heli karaa bogga kor ku qeexan.
Waxaa laguu sheegi doonaa wixii isbedel ah Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah:
beddeli karaa macluumaadkaaga shakhsiyeed:
• By noo soo dirayso
• By gashid xisaabtaada
Sidee our site xamili Ha Raad signalada?
Waxaan sharaf Ha Raad calaamadaha iyo Ha Raad-, cookies warshad, ama isticmaalka advertising markii a Ha Track (DNT) hab browser waa meel.
our site ma ogolaan-dhinac saddexaad raadraaca dabeecadda?
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in la oggolaado-dhinac saddexaad raadraaca dabeecadda
CUP (Children Act Protection Privacy Online)
Marka ay timaado in ururinta macluumaadka shakhsiga ah laga bilaabo carruurta da'doodu ka yar tahay 13 sano jir ah, Xeerka Online Carruurta ee Ilaalinta Asturnaanta (CUP) dhigeysa waalidiinta in ay gacanta ku. Guddiga Ganacsiga ee Federaalka, United States’ Hay'adda ilaalinta macaamiisha, hirgelinaayo Rule Coppa, taas oo ku noqotaa waxa ka shaqeeya of websites iyo adeegyada online waa in la sameeyo si ay u ilaaliyaan asturnaanta iyo badbaadada carruurta online.
Waxaan si gaar ah ma suuq carruurta da'doodu ka yar tahay 13 sano jir ah.
Practices Information Fair
Macluumaadka Fair Practices Principles The sameeyaan laf sharciga gaarka ah ee Maraykanka iyo fikradaha ay ka mid ayaa door muhiim ah horumarinta sharciyada ilaalinta xogta dunida dacaladeeda. Fahamka ee Macluumaadka Fair Practice Principles iyo sida ay tahay in loo fulin waa muhiim in ay u hoggaansamaan sharciyada gaarka ah oo kala duwan in loo ilaaliyo macluumaadka shakhsiga ah.
In si ay u noqon in line la Macluumaadka Fair Practices waxaan qaadi doonaa talaabo soo socda ka jawaabaan, waa in jebinta xogta a dhacaan:
Waxaan ku wargelin doonaa users ka via in-site wargelin
• gudahood 7 maalmood oo shaqo
Waxaan sidoo kale ku heshiiyaan in ay Sixidda Mabda'a Individual ah taas oo u baahan in shakhsiyaad xaq u leedahay inaad si sharci ah ku eryan xuquuqda hirgalin ka dhanka ah xogta ururiya iyo Processor ku fashilma in ay u hoggaansamaan sharciga. Mabda 'Tani waxay u baahan ma aha oo kaliya in shakhsiyaad leeyihiin xuquuq hirgalin ka dhanka ah dadka isticmaala xogta, laakiin sidoo kale in shakhsiyaad leeyihiin laysu maxkamadaha ama hay'adaha dawladda si ay u baaraan iyo / ama dacwad non-waafaqsan by Processor xogta.
Spam KARAA Act
Xeerka CAN-Spam waa sharci in dhigaya xeerarka email ganacsi, abuurayaa shuruudaha farriimaha ganacsiga, qaata siinayaa xaq u leedahay emails loo soo diray iyagii ku joojiyay, iyo noqotaa baxay rigoorayaal adag xadgudubyada.
Waxaan soo ururin cinwaanka emailkaaga si ay u:
• U dir macluumaad, jawaabaan weydiimaha, iyo / ama codsiyada kale ama su'aalo
• amarada Hab-iyo in ay u diraan macluumaadka iyo wararka ku saabsan amarada.
• aad dir macluumaad dheeraad ah oo la xiriira badeecada iyo / ama adeeg
• Suuqa in liiska waraaqaha ama sii wado in emails macaamiisha noo soo dir ka dib markii macaamilka ganacsi asalka uu ka dhacay.
Si waafaqsan CANSPAM, aan ku heshiiyaan in ay soo socda:
• Ma isticmaali maadooyinka been ah ama marin habaabin ama cinwaanada email.
• Aqoonso fariinta sida xayeesiin jidka qaar ka mid macquul ah.
• Ku dar cinwaanka jireed ee xarunta ganacsiga ama goobta aan.
• La soco adeegyada email marketing dhinac saddexaad for waafaqsanaanta, haddii mid ka mid ah waxaa loo isticmaalaa.
• Honor lagaga bixi / codsiyada Unsubscribe si deg deg ah.
• U ogolow dadka isticmaala in Unsubscribe adigoo isticmaalaya link hoose ee email kasta.
Haddii wakhti kasta aad rabto in aad Unsubscribe ka helaya emails mustaqbalka, aad email noogu soo kartaa
• Raac tilmaamaha hoose ee email kasta.
oo aan si dhakhso ah aad ka saari doonaa ka ALL warqadihiisa.
Haddii ay jiraan wax su'aalo ah oo ku saabsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah this, waxaad la xidhiidhi kartaa adigoo isticmaalaya macluumaadka hoos ku qoran.
wadada Khoriva, 50
Edited Last on 2016-07-05